Hahazo Ny Zom-pirenena Amerikana Izy 60 Taorian’ny Nananganana Azy, Saingy An’arivony Maro Ireo Mbola Miandry Ny Zom-pireneny · Global Voices teny Malagasy
Hahazo Ny Zom-pirenena Amerikana Izy 60 Taorian'ny Nananganana Azy, Saingy An'arivony Maro Ireo Mbola Miandry Ny Zom-pireneny
Voadika ny 13 Jolay 2016 6:55 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, Français, русский, English
Ella Purkiss fony izy mbola kely notezaina tao Dallas izay zaza vahiny natsangana avy any Korea Atsimo. 62 taona izy ankehitriny ary hanao ny fianianany ho olom-pirenena Amerikana. Sary: Courtesy of Ella Purkiss
Ity lahatsoratra nosoratan'i Maura Ewing ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 1 jolay 2016, ary navoaka eto indray noho ny fifanarahana hifampizara votoaty.
Tamin'ny volana janoary, taorian'ny 13 volana niandrasana, nomena fanampiana ho an'ny velona noho ny fahafatesan'ny vadiny ihany i Ella Purkiss tamin'ny farany. Nilaza izy fa raha mbola niampy iray volana mahery ny fiandrasany dia mety ho voaroaka tao an-tranofiarany ao Pahrump ao amin'ny fanjakana Etazonia, ao Nevada izy.
Ny zoma manaraka, rehefa nonina tao Etazonia nandritra ny 60 taona, nahazo ny zom-pirenena Amerikana izy.
Natsangana avy tao Korea Atsimo i Purkiss, 62 taona fony izy mbola 2 taona tamin'ny taona 1956. Niaina ny 60 taona voalohany nivelomany tamin'ny fieritreretana fa olom-pirenena Amerikana izy, satria izany no nolazain'ireo ray aman-dreniny nanangana azy. Nifidy izy rehefa fifidianana, nanao mpitsara ary niasa ho elektrisianina sy mpanao volo manana fahazoan-dalana.
Gaga izy raha nandre, roa volana taorian'ny nahafatesan'ny vadiny tamin'ny 2014 fa tsy mahazo tombontsoa amin'ny Fiahiana Ara-tsosialy noho ny sata momba ny zom-pireneny. Araka ny nambarany tamin'ny PRI tamin'ny volana Desambra, tsy nameno ny antontan-taratasy araka ny tokony izy ny ray aman-dreny nitaiza azy raha nanangana azy.
Tsy afaka manontany ny ray aman-dreniny mikasika ny zava-nitranga intsony izy ankehitriny satria efa samy maty izy ireo. Mety hoe tsy nahafantatra ny dingana tokony narahana izy ireo, na koa tsy te-handoa sarany mifandray amin'izany, hoy izy nanombatombana. Na inona na inona anefa antony, tsy fantany intsony izay tokony ataony.
“Raha tsy afaka matoky ny ray aman-dreninao ianao, iza no tokony hatokisanao?” Hoy izy. “Zazakely mety tsy nanan-kialofana aho ary lasa olom-pirenena zokiny mety ho tsy manan-kialofana. Ahoana no nanampian'ny fananganan-janaka ahy? “
Tsy mba manana izany olana izany intsony ny ankizy natsangana avy any ivelany amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny nandanian'ny Kongresy ny Lalànan'ny Zom-pirenena ho an'ny Ankizy tamin'ny taona 2001, mahazo ny fizakana zom-pirenena Amerikana US avy hatrany ireo ankizy vahiny natsangana.
Nihatra foana tamin'ireo ankizy vahiny natsangana rehetra latsaky ny 18 taona tamin'izany fotoana izany ny lalàna, fa tsy ho an'i Purkiss. Tombanan'ireo mpiaro ny ankizy natsangana ho 15.000 eo ho eo ny olona (natsangana) lasa tsy manan-tanindrazana.
Tsy nahomby ny resaka nifanaovan'i Purkiss tamin'ny mpahay lalàna. Niezaka niara-miasa tamin'ny manampahefan'ny fifindra-monina sy ny Fiahiana ara-tsosialy azy manokana izy saingy tafiditra tanatin'ny tontolo mitambolombolona amin'ny fivezivezena any amin'ny sampam-panjakana iray mankany amin'ny hafa, ary avy eo dia miverina amin'ny voalohany ihany.
Manoloana ny fahaverezan'ny tranony na koa ny mety hisian'ny fandroahana any amin'ny firenena izay tsy olom-pirenena ao akory izy, ary tsy mahafantatra na iza na iza no tsy miteny ny fitenin'ny olona any, dia nandà tsy hangina sy tsy hipetra-potsiny izy. Niteny tamin'ny haino aman-jery izy ary nanoratra mailaka tany amin'ireo loholona maromaro mba hangataka fanampiana. Miahiahy izy fa noho ny faneren'ny haino aman-jery, nanampy azy ny loholona Amerikana Dean Heller ao Nevada mba hivaly haingana ny fangatahany. (Tsy azo hanehoan-kevitra avy hatrany ny biraon'i Heller.)
Matahotra izy kanefa faly ihany koa hanao fianianana ny Zoma manaraka.
“Manantena aho fa tsy hatahotra rehefa any,” hoy izy tamin'ny firoky avy any atsimo. “Mahatsiaro ho zaza aho amin'ny lafiny iray, tahaka ny fanombohan'ny fiainana izay noheveriko fa nivelomako, saingy lainga avokoa izany rehetra izany.”
Tsy ny rehetra no mahatsapa fa afaka ho sahisahy hiresaka amin'ny fanaovan-gazety na mpanao lalàna tahaka ny nataon'i Perkiss. Tsy sahy nitabataba noho ny tahotry ny ho very asa i Lisa, izay miasa ho mpanoro hevitra ao amin'ny orinasa Fortune 500 ao California ary natsangana avy ao Iran fony izy roa taona. Nangataka izy mba ho fantarina amin'ny alalan'ny solon'anarana, iray amin'ireo nampiasaina tamin'ny tati-baovao teo aloha, mikasika ity tantara ity noho ny antony mitovy.
Raha nitady asa izy tamin'ny 2007, nilaza izy fa olom-pirenena Amerikana satria izay no noheveriny. Herintaona taty aoriana, raha nangataka pasipaoro Amerikana izy vao nahafantatra fa mbola tsy nizaka ilay mahaolom-pirenena.
“Somary nampatahotra ny firesahana voalohany tamin'ny mpisolovava”, hoy i Lisa. “Nilaza izy fa raha tian'izy ireo, dia ampodiana any Iran aho.'”
“Inona no hataoko? Tsy miteny ny fitenin'i Iran aho ary tsy manana ny finoam-pivavahana misy any. Tamin'izay fotoana izany, natahotra aho, tsy fantatro izay tokony hatao. “
Nanoro hevitra azy ny mpahay lalàna fa na manambady olom-pirenena Amerikana izy na mangina. Ity farany no nosafidiany.
Tamin'ny volana Novambra 2015, nampiditra lalàna hamenoana ny banga sy manome zom-pirenena ho an'ireo ankizy natsangana tahaka an'i Perkiss sy Lisa ny Senatera Amerikana Amy Klobuchar ao Minnesota .
“Noho ny tsy fananan'izy ireo zom-pirenena, tsy tafiditra teny amin'ny oniversite ireo ankizy natsangana ary nitodika nitady asa,” hoy i Klobuchar nanoratra tamin'ny fanambarana nomena ho an'ny PRI. “Tsy rariny izany loza mitatao maharitra ho an'ny fiainan'izy ireo izany, ary izany no mahatonga ahy miasa mafy hahazoako fanohanana bebe kokoa tamin'ireo mpiara-miasa amiko avy amin'ny roa tonta (Repoblikana sy ny Demokraty) tamin'ny volavolan-dalàna natolotro.”
Dinihina ao amin'ny komity ny volavolan-dalàna. Nilaza i Emily Kessel, talen'ny fisoloana vava ao amin'ny Sampan-draharaham-pirenena Amerikana Koreana sy ny Fikambanana Fiarahamiasa ho an'ny Fanabeazana fa marobe ireo mpanao lalàna misalasala hiasa amin'ny zavatra mifandraika amin'ny fifindra-monina ao anatin'ny taom-pifidianana.
“Mino aho fa be dia be ny fifanjevoana mikasika izay voalazan'ity volavolan-dalàna ity sy ny fanehoan-kevitra mahery vaika manohitra azy,” hoy i Kessel. “Ny olon-dehibe amin'izao fotoana izao no tena olona iharan'izany. Angamba izany no mahatonga azy heverina ho zava-dehibe. Saingy mampahatsiahy ny olona izahay fa ankizy izy ireo [raha natsangana] ary lasa olon-dehibe avokoa ny ankizy rehetra. “